Raysulwasaaraha DFS Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka tacsiyeeyay geerida Janaraal Maxamed Cali Samatar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaaraha DFS Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka tacsiyeeyay geerida Janaraal Maxamed Cali Samatar
August 20, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa tacsi u diray qoyskii, qaraabadii, asxaabtii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday S/Guud Maxamed Cali Samatar oo ku geeriyooday dalka Maraykanka.
RW wuxuu ku sifeeyay S/guud Cali Samatar nin ku suntanaa Waddaniyadda Soomaaliyeed, kana mid ahaa hoggaamiyaashii iyo saraakiishii doorka weyn ka qaatay dhismaha Ciidanka Soomaaliyeed.
“Qof kasta waa uu dhimanayaa, geeriduna waa xaq, anigoo ku hadlaya magacayga kan Xukuumadda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan Allah uga baryeynaa in uu naxariistiisa ka waraabiyo Marxuum Maxamed Cali Samatar oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hore ee dalka soo maray isla markaana qeyb libaax kasoo qaatay dhismaha iyo qalabeynta ciidanka Xoogga dalka .” sidaa ayuu bayaan ku yiri RW Soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
Maxamed Cali Samatar oo xilal badan kasoo qabtay dowladii kacaanka ahayd ee Madaxweyne Maxamed Siyaad Bare ayaa ku geeriyooday xalay oo Sabti ahayd gobolka Virginia ee dalka Maraykanka, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa.
Janaraal Samatar ayaa dalka kasoo noqdey Madaxweyne Ku-Xigeenka 1-aad, Raysulwasaare, iyo Wasiirka Gaashaandhiga xilligii dowladii kacaanka.
August 25, 2016 Meydka Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar oo Muqdisho laga dajiyay
Labo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka fuliyay Jubbada Hoose
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa labo dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ku dilay duqeyn ka dhacday gobolka Jubbada Hoose, sida taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay ku sheegeen bayaan. Duqeynta ayaa dhacday Talaadadii kadib markii maleeshiyada [...]
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo kulan la qaatay safiirka Turkiga ee Soomaaliya Olgan Beker
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo safar shaqo u jooga Muqdisho ayaa maanta oo Arbaco ah kulan kula qaatay xarunta safaarada Turkiga uu ku leeyahay caasimada Soomaaliya safiirka Turkiga ee Soomaaliya Olgan [...]